Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro - Xiliga 2 Taariikhda Premier League + Dulmar & Fikradaha - Muuqaalka Cradle
Ha i xoog sheegan Miss Nagatoro Season 2
Leave a Comment on Ha ila ciyaarin Miss Nagatoro – Xiliga 2 Taariikhda Premier + Dulmar & Fikrado
Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro waa Anime wax badan ayaan arkay 2 bilood ee la soo dhaafay. Waxay ahayd meel kasta. Waxaan arkay memes, clips-yar, fiidiyowyo dherer buuxa ah iyo maqaallo arrintan ku saabsan anime. Dhab ahaantii, waxaanu ku soo bandhignay boggayaga Waa inuu Daawadaa Anime Guga 2021 marka tani waa mid aad u caan ah Naadi taas oo aan dooneyno inaan daboolno waxaana laga yaabaa inaan xitaa muujin doono dib u eegis go'an sidoo kale.
Waqtiga Sawirka – Ha i Caylin Miss Nagatoro
Sheekadu waxay ku salaysan tahay laba xaraf Nagatoro iyo Naoto. Waxaan soo bandhignay tan Naadi on maqaal hore:
"Qaar idinka mid ah ayaa laga yaabaa inaad horeyba u maqasheen taxanahan sababtoo ah sida ay caan u yihiin waxyaabaha laga helo. Ha i Caylin, Nagatoro waa anime sheeko qosol iyo jaceyl ah oo daba socota qiso wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Naoto Hachiouji, oo ay u cagajugleyso gabar qurux badan oo magaceeda la yiraahdo Nagatoro. Nagatoro kaliya jecel cagajuglaynta iyada Senpai siyaabaha ugu naxariista daran ee suurtogalka ah.”
Nagatoro waxa uu la ciyaaraa Naoto – Ha i xoogin Miss Nagatoro
Source: cradleview.net/waa in la daawado-anime-of-spring-2021/
Haddii aad hore u aragtay Anime-kan, markaa waxaad runtii rajaynaysaa xilli 2 iyo gabagabo suurtagal ah oo ku saabsan jacaylka u dhexeeya Nagatoro iyo Naoto, dhamaan waa wax aan sugeynay waana sababta Anime-kan aan uga doodi doono in xilli ciyaareedka 2 uu suurtogal yahay iyo in kale iyo waqtiga uu soo bixi doono.
Jilayaasha ugu waaweyn ee ku jira Anime Ha Ila Ciyaarin Miss Nagatoro badankooduna waa kuwo aad loo xasuusan karo. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale u dhaqma sidii kuwa ka soo horjeeda Naoto laakiin sidoo kale waxay u dhaqmaan sidii jilayaal taageera laakiin sidoo kale dib u soo celin. Waxay leeyihiin qaabab animation gaar ah oo inta badan waan ka helaa iyaga.
Hayase Nagatoro waa mid ka mid ah labada jilaa ee ugu muhiimsan Anime waxayna hubaal ahaan lahayd inay ku jirto Ha Toy With Me Miss Nagatoro Season 2 si aan u sugno muuqaalkeeda quruxda badan ee xusuusta leh maadaama ay had iyo jeer la jirto dhinaca Nagatoro Naadi. In Naadi sida aad si fiican u garan karto, waxay jeceshahay inay cagajuglato oo ay asal ahaan ka cadhaysiiso Senpai, Naoto.
Second dabcan waa Naoto wuxuu leeyahay magac aan soo sheegay laakiin hadda, waan u yeedhayaa oo kaliya Senpai. Waxaa loo malaynayaa inuu yahay jilaa laakiin aad ayuu u hooseeyaa oo daciif ah. Wuxuu si joogto ah u bixiyaa Nagatoro oo wax badan igama siiso inaan u naxariisto. Dareen xooggan ayuu u hayaa Nagatoro wuxuuna saaxiib la yahay Gamo-chan iyo Yoshi labadaba.
Buul waa Gamo-chan nafteeda. Gamo-chan u dhaqmo sida mini ka soo horjeeda Senpai, iyada oo si joogta ah u sheegta muuqaalkeeda iyo sida buskeeda ay had iyo jeer u qabato indhihiisa. Way ka jilaa taageere badan marka loo eego jilaha ugu muhiimsan, laakiin waxay ku leedahay door joogto ah Naadi. Waxay caadi ahaan abuurtaa madadaalo yar si ay u caawiso xidhiidhkooda.
Ugu dambeyntiina waan haysannaa Yoshi, waa ardayad dugsi sare ah iyo mid ka mid ah saaxiibada Nagatoro. Caadi ahaan way ku dayataa ama ku celisaa asxaabteeda tilmaanta ama erayada ugu dambeeya oo ay raacdo hareeraha Gamo-chan, waxay tan oo dhan u sameeyaan si ay gacan uga geystaan ​​samaynta xiriir ka dhexeeya labada.
Dhamaadka Ha Ila Ciyaarin Miss Nagatoro
Dhamaadka Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro ma arko ka geeskeena Nagatoro dhab ahaantii waxay u qirtay jacaylkeeda Senpai. A quruxsan niyad-jab ah oo dhammayn la'aan ah Naadi. Laakiin maxay tani ka dhigan tahay Naadi, sidee ayay saamayn ugu yeelan doontaa in uu jiri doono iyo in kale ha igula ciyaarin Miss Nagatoro Season 2.
Nagatoro waxay muujinaysaa cuncunkeeda - Ha i xoogin Miss Nagatoro
Qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa sheegay in Nagatoro uu si joogta ah u jeesjeesay Senpai dhab ahaantii waa hab yaab leh oo uu u sheego in ay jeceshahay Senpai. Waxaa muhiim ah in aan ka wada hadalno dhamaadka maadaama ay muhiim u tahay go'aaminta haddii ay suurtogal tahay iyo in kale ha igula ciyaarin Miss Nagatoro Season 2 ay suurtogal tahay iyo in kale. Waa qaabkeeda ay ugu muujinayso isaga. Tani ma waa aragti macquul ah
Nagatoro wuxuu ku jeesjeesay Naoto -
? Hagaag…. Malaha, taasi waa jawaabta. Waxaan u maleynayaa inay tahay mid aad loo saadaalin karo laakiin ma dhaafi doono. Sababta tani waa manga-ga oo aynaan si dhab ah u gaarin heerka meesha Nagatoro qirto Senpai markaa wali waanu sugayna, kaliya sugayna.
Ma jiri doonaa A Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro Season 2?
Laga soo bilaabo daraasaddeena ilaa Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro Waxaan hadda ognahay in aan dhammaan manga-ga loogu talagalay Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro la dhamaystiray. Iyo, dhab ahaantii, wali way socotaa ilaa Juun 2021. Tani waa wax weyn haddii aad tahay taageere Anime iyo Manga. Nagatoro weli ma sheegin Senpai sida ay isaga ka qabto iyo lidkeeda.
Nagatoro iyo Gamo-chan ayaa ku doodaya – Ha i Caylin Miss Nagatoro
Bandhiga waxaa lagu amaanay goobo badan oo diyaar u ah in lagu daawado Roll Crunchy Waxay heshay qiimeyn sare waxaana hubaal ah inay dhowaan soo muuqan doonto muuqaal kale. Waxaan aaminsanahay inuu jiri doono xilli kale oo ha igula ciyaarin Miss Nagatoro. Aad bey caan u tahay, mangaguna wali wuu socdaa. Markaa shaki kuma jiro in ay jiri doonto xilli kale oo ka mid ah Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro oo waanu arki doonaa si dhakhso ah ayaan filayaa.
Goorma Aysan Ila Ciyaari Doonin Miyiga Nagatoro Xiliga 2 Premier?
Waxaan dhihi lahaa marka la siiyo macluumaadka aan ka hayno Naadi iyo Manga in xilli labaad ee Ha igula Toy Miss Nagatoro ay hawada soo geli doonto wakhti kasta 2022 ama at the dhamaadka of 2021. Tani waxay la socotaa markii la sii daayay, sidoo kale, waxaan hubnaa in baahida loo qabo xilliga labaad ee Ha Toy With Me Miss Nagatoro waa mid aad u sarreeya oo caannimadeeda ayaa kaliya ku dari doonta taas.
Maalinta fasaxa ah – Ha i Caylin Miss Nagatoro
Si kastaba ha noqotee, warshadaha Anime waa mid aan la saadaalin karin waligeyna si dhab ah uma sheegi karno in ay jiri doonto a Ha ila Ciyaarin Miss Nagatoro Xilliga 2. Sababtan awgeed waxaan kugu boorineynaa inaadan u qaadan tan laakiin inaad is weydiiso oo aad la socoto maqaalladayada cusub ee kale ee ku saabsan Anime.
Sida had iyo jeer waxaan rajaynaynaa in maqaalkani uu ahaa mid waxtar leh oo ku wargelinaya sidii la rabay. Waxaan rajeyneynaa inaad akhrido maqaalladayada oo ay ugu muhiimsan tahay maalin wanaagsan oo aad badbaado! Haddii aad rabto inaad taageerto goobta waxaad ka iibsan kartaa qaar ka mid ah badeecadayada hoos ku xusan.
Gelitaan Hore Qalabka ugu wanaagsan ee Anime Cosplay ee 2021
Gelitaanka Xiga Maxay Tahay Waa Inaad Daawataa Samurai Champloo